Naya Post Nepal | अष्ट्रेलियामा छोरा–छोरी छन् ? यी कुरा पढ्नुहोस् – न’त्र ज्या’नै भन्न न’पाइएला है !
अष्ट्रेलियामा छोरा–छोरी छन् ? यी कुरा पढ्नुहोस् – न’त्र ज्या’नै भन्न न’पाइएला है !
काठमाडौ । अष्ट्रेलियामा छोरा–छोरी छन् ? यी कुरा पढ्नुहोस् , नत्र ज्यानै भन्न नपाइएला है । यी शब्द अष्ट्रेलियामा रहेका सरल गुरुङ्गका हुन् । अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया पुगेकी एक नेपाली चेलीको मृ’त्यु’प’छि श’व नेपाल पठाउन समेत त्यहाँ रहेका नेपालीले पैसा उठाउनुपर्यो ।
पैसा उठाउने सहयोगी कार्यको अगुवाई पत्रकार गुरुङ्गले गर्नुभएको थियो । सहयोगीदाताहरुलाई धन्यवाद दिँदै भिडियोमा आउँनुभएका पत्रकार गुरुङ्गले सिड्नीमा बस्दै आएकी २२ वर्षिय सुस्मिता कपालीको मृ”त्यु’पछि तीतो यर्थाथ ओ’क’ल्न सार्वजनिक रुपमा आउँनुभयो ।
काठमाडौं, कीर्तिपुर घर भएकी कपाली अध्ययनका लागि २ वर्षअघि अष्ट्रेलिया पुग्नुभएको थियो । एमपीएल पढिरहेकी उहाँ मृ’त फे”ला पर्नुभयो ।उहाँको मृ’त्यु”को कारण आफै भएको प्रहरीको अ’नु’श’न्धा’नमा देखिएको छ ।
त्यसपछि पत्रकार सरल गुरुङ्गले अष्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीहरुमा केही बर्ष अ’त्य’न्तै त’ना”व’को जी’न्दगी हुने खु’लासा गर्नुभयो । उहाँले अष्ट्रेलिया आउँने विद्यार्थीले नेपालमा रहेका परिवारलाई ठूलो ऋणको भा’री बो’का’एर आएका हुन्छन् ।
त्यो ऋणको ब्या’ज ति’र्न घरपरिवारलाईपनि पैसा पा’उँनै पर्यो । त्यहाँ आएपछि अ’निवार्य कलेज पढ्नुपर्छ । कलेजको फि, ट्युशन पढ्नै पर्छ त्यसको फि, अनि खान, बस्न ( कोठाभाडा ) सबै जोहो गर्न सानो बुद्धी र थोरै शारीरिक क्षमता भएकाहरुका लागि अति क”ष्टदायी हुन्छ ।
१८ घण्टा काम गर्दा समेत त्यो सबै धान्न सकिन्न । तर कलेजको असाइनमेण्ट, कक्षामा उपस्थिती,.. उस्तै त आत्तिएका हुन्छन् । यस्तो बेलामा उनीहरुमा अत्यन्तै धेरै द’वा”व हुन्छ । त्यही बेला घरबाट पैसा पठाउ भनेर झन द’वा’व थपियो ।
नेपालमा पैसा नहुँदा परेका असरबारे त्यहाँ रहेका ब’च्चालाई भनियो भने धेरैले त्यसलाई पचाउँन सक्दैनन् । यही कारण आफै जीवन गुमाउनेको संख्या धेरै भएको छ । यसैले क्रिपया नेपालमा रहेका अभिभावक जसले बच्चालाई पढ्न अष्ट्रेलिया पठाउँनुभएको छ ।
उहाँहरुलाई द”’वा’व हैन सा’न्त्व”ना दिनुहोस् । पैसा ठूलो हैन जीवन भन्दा, जीवन भए पैसा एकदिन कमिन्छ भन्दै सरलले हा’त जो’डे’र आ”ग्रह गर्नुभएको छ । पारिवारीक द’वा”व र आर्थिक भार कै कारण मा’नसि’क त’ना”व अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीले झे”लिरहेको उहाँको दा”वी छ ।
यही कारण आफै ज्यान गु’मा’उ”नेहरुको संख्या बढीरहेकोपनि उहाँको भनाई छ । यसैले त्यहाँ रहेका विद्यार्थीहरुका अभिभाव तपाईहरुले आफ्ना बच्चालाई सा’न्त्व”ना दिनुहोस् ।
केही बर्ष दु:”ख हो । त्यसपछि त्यहाँ सुख हुन्छ । पढाई सकिएपछि त झनै सुख हुन्छ । ‘हि”म्मत र हरेश न’खा’न सबैले हौ’स’ला दि”औँ । ज’हाँ’पनि सु’रुका दिनमा सं’घ”र्ष गर्नैपर्छ । सं’घ’र्ष नै स’फलता हो ।
२०७८ माघ २०, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 134 Views